prabhu life insurance(prabhu life insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा सन्तोष प्रसाई नियुक्त
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सन्तोष प्रसाई नियुक्त भएका छन्। कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ ११ गते बुधबार बसेको बैठकले प्रसाईलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो। जेठ ११ गतेबाटै लागू हुने गरी प्रसाईलाई सीईओमा नियुक्ति गरिएको छ। उनको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। कम्पनीले गत वैशाख २२ गते...
प्रभु लाइफका नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष अमात्यद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाण्डौ। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष अमात्यले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन्। नवनियुक्त अध्यक्ष अमात्ले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालबाट आज सपथ ग्रहण गरेका हुन्। सपथ ग्रहणसँगै आज उनले कार्यभार सम्हालेका छन्। कम्पनी सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले संस्थापक सेयरधनीहरुबाट...
प्रभु लाइफको खुद बीमाशुल्क आर्जनमा ६४.६४%को बढोत्तरी, नाफा कति ?
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ६४.६४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ६० करोड ९९ लाख २९ रुपैयाँ...
इक्रा नेपालद्वारा प्रभु लाइफको रेटिङ पुनःपुष्टि
काठमाण्डौ। इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई विगतमा प्रदान गरेको (इक्राएनपी–आईआर) बीबी निष्कासनकर्ता रेटिङलाई पुनःपुष्टि गरेको छ। उक्त रेटिङ प्राप्त गर्ने निकायहरु समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न चुक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेका मानिन्छन्। उक्त रेटिङ निष्कासनकर्ताको सामान्य क्रेडिट विश्व...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन १.४ अर्ब, नाफामा २८३.४७%को उछाल
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब ४० करोड पैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको यो खुद बीमा शुल्क अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.७८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले बीमा शुल्क आर्जन १ अर्ब १५ करोड...
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११५.६० प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ५० करोड ४८...
पीएलआई : पहिलो कारोबारमा झट्का, अहिले धमाका !
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । भर्खरै आईपीओ निष्कासन गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड (पीएलआई) ले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा धमाका गरेको छ। नयाँ आईपीओ निष्कासन गरेका बीमा कम्पनीमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीपछि सेयरमूल्य १ हजार प्रतिकित्ता नाघेको प्रभु लाइफमात्रै एक कम्पनी हो। चालु आर्थिक वर्षमा आईपीओ निष्कासन गरेका...
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले आज सोमबारदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ। यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६० लाख कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निष्कासन गरेको हो। कुल कित्तामध्ये ५ प्रतिशतले हुन आउने ३ लाख कित्ता सो कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र अर्को ५ प्रतिशतले हुन आउने ३ लाख कित्ता म्युचुअल फन्डहरुका लागि र बाँकी रहेको ५४ लाख...
प्रभु लाइफको आईपीओ भोलिबाट खुल्ने, कति दिने आवेदन ?
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले भोलि सोमबारदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६० लाख कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्ने भएको हो। आईपीओमा छिटोमा पुस २ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। सो अवधिभित्र सबै आईपीओ बिक्री भएन भने ढिलोमा पुस १३ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने गरी मिति तोकिएको...
यस्तो छ आईपीओ जारी गर्न लागेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको अबको ३ वर्षको वित्तीय प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । यही मंसिर २९ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अबको तीन वर्षको वित्तीय प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक वित्तीय प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बीमाशुल्क ४ अर्ब ८६ करोड बढी पुग्ने छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रक्षेपित कुल बीमाशुल्कभन्दा ५० प्रतिशत हो। आव...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा शुक्रबार झन्डै ६ लाख कित्ता सेयर थपिएको छ। नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १५ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएसँगै नेप्सेमा उक्त परिमाणमा सेयर थपिएको हो। नेरुडेले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेयरधनीहरुलाई वितरण गरेको १५ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। सूचीकृत बोनस सेयरको संख्या ५ लाख...